Chelsea oo liiska Janaayo ee suuqa ku darsatay Adem Ljajic. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo liiska Janaayo ee suuqa ku darsatay Adem Ljajic.
Chelsea oo liiska Janaayo ee suuqa ku darsatay Adem Ljajic.
Chelsea ayaa diiradu u saaran tahay xidiga Fiorentina, kaasoo horaan iska diiday inuu ku biiro Manchester United. Sida uu qoray wargeyska Caught Offside.
Tababare Roberto Di Matteo ayaa isha ku haaya weeraryahanka da’yarka ah ee reer Serbia Adem Ljajic, wuxuuna ku darsaday liiska uu Janaayo suuqa ka raadsan doono. Sida uu sheegayo wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee Calciomercato.com, halka ay Chelsea wakiilo daawada u dirtay weeraryahanka kale ee isna da’da yar Stevan Jovetic, kaasoo laga yaabo inay soo dhaqaajiyaan Janaayo.
Ljajic ayaa awoodiisa iyo xirfadisa kusoo bandhigaayey Serie A, wuxuuna kooxdiisa u ahaa mid ay ku tashtaan weeraryahakaan tayada leh.
Delio Rossi, oo ah tababarihii hore ee Fiorentina, ayaa da’yarkaani ka dhaawacmay intii lagu jiray kulankii ay la ciyaarayeen Novara, 21 jirkaan Ljajic ayaana maareeye ka ahaa goolal Fiorentina ah.
2010kii ayuu weeraryahanka Serbia u dhowaa inuu ku biiro Manchester United laakiin heshiiska ayaa burburay daqiiqadii ugu dambeysay. Wuxuuna u saxiixay kooxda Talyaaniga ah ee Fiorentina, oo 6.5 kaga soo iibsatay Partizan Belgrade, Manchester United ayaana wax badan taageerayaasheedu ka welwelaayeen xidigaan tayada leh ee gacmahooda ka baxsaday, wuxuuna 5 gool u dhaliyey 59 kulan oo uu u saftay La Violas.
Xiisaha Chelsea ay u heyso Ljajic ayaa wax dhib ah ku imaan doonin, hadii aysan sidii Manchester United oo kale wax iska qaldin.